7 qalab weyn oo loogu talagalay naqshadeeyaha shabakadda | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Qalabka Naqshadeynta, Technologies
Naqshadaynta websaydhku waxay noqon kartaa geedi socod dheer, shaqo badan oo adag. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay waxay leeyihiin qalab iyo ikhtiyaarro kuu oggolaanaya inaad si habsami leh u socodsiiso howlahaaga oo xoogaa waqti ah soo iibso. Waxaan ku noolnahay waqti ay jiraan qalab badan oo websaydh ah iyo codsiyo dheeri ah oo daboolaya dhammaan noocyada baahiyaha, markaa waa inaan ka faa'iideysanaa.
Markaas waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago toddobo tusaale oo ka mid ah, oo dabcan waxaan kugu martiqaadayaa inaad nala wadaagto qaybta faallooyinka qalab kasta oo kale oo aad shakhsi ahaan u aragto inay faa'iido u leeyihiin wax ka qabashada mashaariicda webka.
2 Nooca qoraalka
Isku-dhafka midabada ayaa xoogaa dhib ku noqon kara waqtiyada qaarkood, midkoodna maxaa yeelay waxaan haysannaa dhowr fikradood oo iska soo horjeeda ama sababtoo ah ma heli karno mid si fiican uga tarjumaya sheegashooyinka mashruuceenna. Xaaladahan Adobe Kuler ayaa ah bedel weyn. Barnaamijkan Adobe ee bilaashka ah waxaa loogu talagalay inuu fududeeyo abuuritaanka midabbada midabka leh lana helo isku-darka ugu habboon. Sidee loo helaa codsigan? Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka diiwaan gashan tahay isticmaale bogga Adobe isla marka aad yeelato username-kaaga iyo lambarkaaga sirta ah waxaad awoodi doontaa inaad si dhakhso leh u hesho. Ma aqaano haddii aad xusuusato in waqti ka hor saaxiibkeen Antonio uu soo saaray fiidiyow ku saabsan qalabkan. Waxaad marin u heli kartaa fiidiyowgeena halkan ka
Waxaan ka soo hadalnay marar badan muhiimada qoritaanka mashruuc kasta waana in go aan ka gaarista midka ugu haboon ay sidoo kale noqon karto dhibaato. Sidaa darteed, codsigani wuxuu noqon karaa qalab muhiim ah marar badan si loo abuuro naqshado. Typecast wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka hesho in ka badan shan kun oo nooc oo ka kala socda Typekit, Google Web Fonts iyo Fonts.com Fontdeck, dhammaantoodna waxay ka imanayaan hal guddi koontarool. Qaabkan waxaad awood u yeelan doontaa inaad doorato nooca ku habboon ee ku habboon qaabka ama codka shaqadaada si aad u fudud oo dhakhso leh. Intaas waxaa sii dheer, codsigan ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto tiirar si aad u abaabusho macluumaadka iyo waxyaabaha ku jira iyo sidoo kale inaad wax ka beddesho ama aad wax ka beddesho farta la doortay. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka doorato font bixiyahaaga menu ka ku yaal aagga dhinaca oo aad doorataa mid kasta oo ka mid ah si aad uga hesho milicsiga natiijooyinka si toos ah isla bogga. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan galno koodhkeeda CSS si aan awood ugu yeelano inaan sifo toos ah ugu galino noocyadaas bogaggaaga shabakadda iyadoo wadarta guud ee hubaal ah in isticmaaleyaashaadu ay ku rakibayaan font oo ay u arkaan isla natiijada adiga.
Waa kordhin loogu talagalay barnaamijka Adobe Photoshop kaas oo kuu oggolaan doona inaad diyaarsato dukumiinti kuu gaar ah si aad u bilowdo naqshadeynta bogagga shabakaddaada iyo sida ugu fiican oo dhan, waxay noqon doontaa daqiiqado gudahood. Loogu talagalay naqshadeeyayaal badan oo websaydh ah qalabkani wuxuu u noqday mid lagama maarmaan ah, gaar ahaan saxnaanta ay bixiyeen hagayaasha si loo gaaro naqshado qumman. Kaliya waa inaad rakibtaa (culeyskiisu aad ayuu uyar yahay maadaama ay tahay kordhin) inaad ku raaxeysato.
Haddii aad ubaahan tahay inaad horumariso siligyadaaga silsiladda ah, codsigani wuxuu noqon doonaa mid aad waxtar u leh maxaa yeelay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad naqshadeyso noocaaga gaarka ah dhowr daqiiqo oo khadka tooska ah ah iyo noocyo kaladuwan oo kaladuwan oo kala duwan: Laga soo bilaabo iPhone, WordPress, Android, Joomla, Facebook Natiijadu waxay noqon doontaa noocyo tayo sare leh oo si fudud loogu isticmaali karo mashaariicdaada. Intaa waxaa dheer, hawlgalkeedu waa mid aad u fudud, dareen leh oo shaqeynaya maaddaama habka shaqadu uu ku saleysan yahay nidaamka jiita iyo hoos u dhaca iyada oo loo marayo qaybaha ama walxaha ay dalabka laftiisa ku siinayaan. Dabcan, waa inaad maskaxda ku haysaa in nooca bilaashka ahi kaliya kuu oggolaanayo adiga hal mashruuc oo dhererkiisu yahay ugu badnaan afar bog, in kasta oo aad kala soo dagsan karto mashaariicdaada qaabab kala duwan oo aad tirtiri karto xilliga aad joojiso adeegsiga.
Markii la sii daayay waxay kicisay rajo aad u weyn mana aha wax lala yaabo. Invision waa aalad diiradda saareysa matalaadda noocyada muuqaalka ah laakiin leh farqi muhiim ah: Codsigan wuxuu u beddelaa shuqulladaada noocyo is-dhexgal ah, noocyo firfircoon oo leh kala-guur iyo animations-ka websaydhka, sidaa darteed majaajilladaada gaarka ahi waxay helayaan xaqiiqo weyn. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad la wadaagto mashruucaaga dhammaan isticmaaleyaasha aad rabto (oo ay ku jiraan dabcan macmiilkaaga) sidaas darteed waa dhakhso, ammaan iyo wax ku ool ah marka la sameynayo bandhigyada mashruuca iyo isdhexgalka naqshadeynta bogga inta aanad bilaabin horumarinteeda.
Xaqiiqdii in kabadan hal jeer ayaan dhibaatooyin kala kulanay maareynta noocyada ugu dambeeyay ee feylasha mashruuc gudahiisa. Gaar ahaan marka isla faylka ay tafatiraan dhowr qof isla waqtigaas. Layervault waa codsi websaydh ah oo kuu oggolaanaya inaad xakamayso oo aad maamusho dhammaan dhinacyada mashruucaaga (wada xiriirka asxaabtaada, maaraynta faylka, iwm.) Isla interface. Waad ku dari kartaa barta shaqada, taas oo kuu oggolaan doonta inaad si otomaatig ah u keydiso wixii isbeddel ah, feyl, fayl, iwm. kujira tusaha LayerVault. Marka asxaabtaada mashruuca waxay heli doonaan cusbooneysiin si loogu wargaliyo waxa shaqada la cusboonaysiiyay ama la beddelay, sidoo kale waxaan sidoo kale ka heli doonaa ogeysiisyada aaladaha kale haddii aan sidoo kale waafajino.
Waxaan ka hadalnay marmar, laakiin hadaadan wali ogayn, waxaan kuu sheegayaa inay tahay aalad aad u faa'iido badan markay tahay dhismaha bogagga shabakadda hab habaysan oo nadiif ah. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso qaab-dhismeedkaaga oo aad ururiso Sass iyo Yar iyo sidoo kale inaad ku hagaajiso faylashaada adoo samaynaya baaritaanno deg deg ah oo otomaatig ah mashruuca aad la shaqeyneyso iyo qaababkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 7 qalab weyn oo loogu talagalay naqshadeeyaha webka
Noocyada usbuuca, noocyada kumbuyuutarka